အူသိမ်တွင် fibromyalgia ကိုအဘယ်ကြောင့်ထိခိုက်ရကြောင်းအရေးကြီးသောလက္ခဏာများပါဝင်နိုင်သည်။
ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်အနေနဲ့သုတေသနမှာ fibromyalgia ရှိအမျိုးသမီးတွေအူသိမ်အူရာထဲမှာတိကျတဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ထိခိုက်မှုမရှိသူတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပါမယ်။ fibromyalgia ရှိသူများစွာသည်တစ်ခါတစ်ရံအစာအိမ်သည်အလွန်အငြင်းပွားဖွယ်ဖြစ်နိုင်သည်ကိုသတိပြုမိလိမ့်မည်။ ဤသည်ကိုလည်းဤလူနာအုပ်စု IBS (ယားယံခြင်းအူသိမ်အူမရောဂါ) ကိုပိုမိုထိခိုက်သောအချက်၌ထင်ဟပ်နေသည်
McGill တက္ကသိုလ်မှကနေဒါသုတေသီများသည် fibromyalgia ရှိသူများနှင့်ကွဲပြားသောအူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာအပင်များဘက်တီးရီးယား ၁၉ ခုကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးဂျာနယ်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည်။ နာခြင်း. လေ့လာမှုနောက်ကွယ်မှအဓိကသုတေသီတစ် ဦး ကလည်းရောဂါလက္ခဏာများ၏ပြင်းထန်မှုနှင့်အူလမ်းကြောင်းဖလိုရာဘက်တီးရီးယားအချို့တိုးပွားလာခြင်းသို့မဟုတ်မရှိခြင်းတို့အကြားရှင်းရှင်းလင်းလင်းဆက်စပ်မှုရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ သို့သော်သူကဤ fibromyalgia ၏အကြောင်းရင်းလားသို့မဟုတ်ရောဂါ၏ကိုယ်နှိုက်ကပိုတုံ့ပြန်မှုရှိမရှိကြည့်ရှုရန်စောလွန်းကြောင်းအလေးပေးသည်။ သို့သော်သူကနောက်ဆက်တွဲလေ့လာမှုများသည်ဤအတွက်နောက်ထပ်အဖြေများပေးနိုင်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။
"Rheumatism and Chronic Pain" အုပ်စုရှိကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ဝင် ၁၈၀၀၀ ကျော်သည်များစွာသောသဘာဝဖြည့်စွက်ဆေးဝါးများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအစီရင်ခံသည်။ အသိနဲ့စမ်းကြည့်ပါ probiotics (ကောင်းသောအူဘက်တီးရီးယား) သို့မဟုတ် Lectinect အစာအိမ်။ များစွာသောသူများအတွက်၎င်းသည်ကောင်းမွန်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည်။ စွမ်းအင်နှင့်စိတ်ခံစားချက်နှစ်မျိုးလုံးအတွက်အူလမ်းကြောင်းကျန်းမာရေးသည်သင်မဟုတ်သောခံစားချက်အတွက်အလွန်အရေးကြီးကြောင်းသိရသည်။
Fibromyalgia သည်နာတာရှည်နာကျင်မှုလက္ခဏာဖြစ်ပြီးကိုယ်ခန္ဓာတစ်လျှောက်လုံးနာကျင်မှုဖြစ်စေနိုင်သည် - စိုးရိမ်ခြင်း၊ အိပ်စက်ခြင်းနှင့်အူသိမ်အူမရောဂါလက္ခဏာများနှင့်ပေါင်းစပ်သည်။ ပုံမှန်လူ ဦး ရေနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အစာအိမ်နှင့်အူသိမ်အူမပြproblemsနာများသည်ဤလူနာအုပ်စုတွင်ပိုမိုတွေ့ရသည်။ ဘယ်ဟာ fibromyalgia နှင့်အူအကြားဆက်သွယ်မှုရှိကွောငျးရှင်းရှင်းလင်းလင်းအရိပ်အမြွက်ပေးထားတယျ။
အကယ်၍ အူသိမ်အပင်သည် fibromyalgia ကိုမြှင့်တင်ရန်သို့မဟုတ်ဖြစ်စေရန်အဓိကအခန်းကဏ္ plays မှပါ ၀ င်ကြောင်းတွေ့ရှိပါက၎င်းရှာဖွေတွေ့ရှိမှုသည်အစောပိုင်းကသိသိသာသာဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်ကုသမှုနည်းလမ်းအသစ်များဖော်ထုတ်ခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
သင်၏အူအတွင်း၌ကျယ်ပြန့်ပြီးရှုပ်ထွေးသောဂေဟစနစ်ရှိသည်။ ၎င်းတွင်ဗက်တီးရီးယားအမျိုးမျိုး၊ ဗိုင်းရပ်စ်များ၊ candida နှင့်အခြားအဏုကြည့်မှန်ပြောင်းများပါဝင်ပြီးသင်အစာအာဟာရဓာတ်များကိုအစာကြေစေခြင်းနှင့်စုပ်ယူနိုင်စေသည်။ သုတေသနပြုချက်အချို့အရကျန်းမာရေးကောင်းမွန်အောင်လုပ်ဆောင်ခြင်းသည်အူသိမ်အပင်၏အလုပ်လုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။
ဒီတော့အူသစ်ပင်ပန်းမန်သည်အလွှာများ၌မကစားလျှင်ဘာဖြစ်မည်နည်း။ ကောင်းပြီ၊ သုတေသီများက fibromyalgia အတွက်အဖြေများသည်ဤဆောင်းပါး၌ကျွန်ုပ်တို့ရေးသားထားသောအူသိမ်အူမအပြုအမူ၌တည်နေနိုင်သည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။
အဆိုပါလေ့လာမှု: 87% တိကျမှန်ကန်မှုကို
သုတေသနလေ့လာမှုတွင်ပါ ၀ င်သူများအား fibromyalgia ရောဂါရှိသူနှင့်ထိန်းချုပ်သည့်အုပ်စုနှင့်ခွဲခြားထားသည်။ အားလုံးသည်ဆီးအိမ်နမူနာ၊ ထိုင်ခုံနမူနာနှင့်တံတွေးကဲ့သို့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုနမူနာများကိုပေးခဲ့သည်။ ထို့နောက်သုတေသီများသည်နမူနာများမှလက်တွေ့အချက်အလက်များကိုပြန်လည်စစ်ဆေးခဲ့ပြီးကျန်းမာရေးထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခဲ့သည်။
ရလဒ်ကအရမ်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ခဲ့ကြသည်။ သတင်းအချက်အလက်အမြောက်အမြားကိုဖြတ်သန်း။ အတုထောက်လှမ်းရေးအပါအ ၀ င်အဆင့်မြင့်ကွန်ပျူတာမော်ဒယ်များကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်၊ fibromyalgia တွင်မည်သူသည်တိကျမှန်ကန်မှု ၈၇ ရာခိုင်နှုန်းရှိသည်ကိုလေ့လာနိုင်သည်။ ၎င်းသည်မယုံနိုင်လောက်အောင်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသည်။ ဤသည် fibromyalgia များအတွက်ထိရောက်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးမှု၏အစဖြစ်နိုင်မည်နည်း ကျနော်တို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
တွေ့ရှိချက်များသည်အဖြေများသာမကမေးခွန်းများလည်းပါ ၀ င်သည်
ဒီလေ့လာမှုက fibromyalgia ရဲ့လက္ခဏာတွေနဲ့အူလမ်းကြောင်းသစ်ဘက်တီးရီးယားတွေများလာခြင်းသို့မဟုတ်မရှိခြင်းတို့အကြားရှင်းရှင်းလင်းလင်းဆက်နွယ်မှုကိုပြသခဲ့သည်။ ပုံမှန်မဟုတ်သောအချိုးများလေလေရောဂါလက္ခဏာများပြင်းလေလေဖြစ်သည်။ ဤသည်အခြားအမှုအရာတို့တွင်ပါဝင်သည်:
သုတေသီများက ၁၀၀% သေချာမှုနှင့်အတူနိဂုံးချုပ်နိုင်ရန်လေ့လာမှုများပိုမိုပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်ဟုပြောကြားသည်။ သို့သော်၎င်းသည် fibromyalgia ၏ရောဂါရှာဖွေမှုတွင်တော်လှန်ရေးတစ်ခုခုကိုပြုလုပ်ရန်အလွန်ကောင်းမွန်သောလက္ခဏာဖြစ်သည်။
fibromyalgia ကဲ့သို့သောနာတာရှည်နာကျင်မှုရောဂါနှင့်ပုံမှန်လေ့ကျင့်ရန်မည်မျှခက်ခဲကြောင်းကျွန်ုပ်တို့သိသည်။ သို့သော်၎င်းသည်၎င်းကိုအရေးမကြီးပါစေနှင့် - စိတ်ကြိုက်လေ့ကျင့်ခန်းများသည်သင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းနာကျင်မှုနှင့်ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုသက်သာစေရန်ကူညီနိုင်ကြောင်းလေ့လာမှုများစွာကပြသခဲ့သည်။ သင်၏ဆေးကုသမှုမှတ်တမ်းနှင့်နေ့စဉ်ပုံစံကိုအမြဲတမ်းထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။
အောက်ပါဗီဒီယိုတွင်သင်တီထွင်ထားသောပျော့ပျောင်းသောတစ်ရှူးအဆစ်အမြစ်ရောင်ရမ်း fibromyalgia ရှိသူများအတွက်လေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်ကိုတွေ့နိုင်သည် chiropractor အလက်ဇန်းဒါး Andorff. ဤသည်နူးညံ့သိမ်မွေ့သောလေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပြီးသင်၏နောက်ကျောနှင့်အဓိကကြွက်သားများကိုရွေ့လျားစေနိုင်သည်။
ရောင်ရမ်းခြင်းကို Cush သော Fibromyalgia နှင့်အစားအစာ
fibromyalgia အထက်အူလမ်းကြောင်းသည်အူလမ်းကြောင်း၏အရေးကြီးသောလုပ်ဆောင်ချက်အရကောင်းမွန်သောရောင်ရမ်းမှုကိုလျှော့ချသောအစားအစာရှိရန်အထူးအရေးကြီးသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသကြားနှင့်အရက်ကဲ့သို့သောရောင်ရမ်းအစားအစာများစားသုံးမှုကိုလျှော့ချခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ ဆန္ဒရှိလျှင် fibromyalgia diet အကြောင်းကိုအောက်ပါဆောင်းပါးတွင်ပိုမိုလေ့လာနိုင်သည်။
လူနာအတော်များများသည်မိမိတို့ကိုယ်ကိုကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သည်ဟုထင်မြင်သည့်မိမိကိုယ်ကိုတိုင်းတာရန်နှင့်မိမိကိုယ်ကိုကုသရန်အသုံးပြုသည်။ ဥပမာအားဖြင့် compression support နှင့် trigger point ball များ၊ သို့သော်အခြားရွေးချယ်စရာများနှင့် ဦး စားပေးမှုများလည်းရှိသည်။ သင်၏ဒေသဆိုင်ရာအထောက်အကူပြုအဖွဲ့နှင့်လည်းပူးပေါင်းရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်းဒစ်ဂျစ်တယ်အုပ်စုတစ်ခုနှင့်ပူးပေါင်းပါ။
ရင်းမြစ်: fibromyalgia နှင့်အတူတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်ပြောင်းလဲ microbiome ဖွဲ့စည်းမှု။ နာကျင်မှု။ 2019 ခုနှစ်။
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/tarmen-fibromyalgi.jpg?media=1648573622 368 700 ရေတံခွန် https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 ရေတံခွန်2019-06-30 12:33:322021-03-24 10:54:27အူအတွင်းဤကွဲပြားခြားနားမှု fibromyalgia ၏အကြောင်းရင်းဖြစ်နိုင်သည်
Fibromyalgia သည် ဦး နှောက်တွင်ရောင်ရမ်းခြင်းတုန့်ပြန်မှုများကိုဖြစ်စေနိုင်သည် - Ankylosing Spondylitis နှင့်အတူနေထိုင်ခြင်း